बिचार Archives - Page3of 8 - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
काठमाडौँ, १४ असार (रासस) ः अमेरिका र चीनलगायत विश्वका १९ मुलुक र यूरोपेली संघ आवद्ध जी–२० समूह राष्ट्रको वार्षिकरूपमा हुँदै आएको सम्मेलन यस वर्ष जापानको ओसाका शहरमा भएको छ । सो समूहमा विश्वको करिब ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि र दुई तिहाई जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो समूहको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व भएको सदस्य राष्ट्रको दाबी रहेको छ । ओसाका सम्मेलनले पनि गतवर्ष अर्जे...
पत्रकार साथीहरु, आज संसदमा अत्यन्तै असंसदीय, अमर्यादित प्रकारको व्यवहार । त्यस व्यवहारले अकारण संसद स्थगित हुने अवस्था बन्यो । दुनियाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा आवश्यक परेका बखत संसदलाई विभिन्न विषयहरुमा सरकारका दृष्टिकोणहरु बारे जानकारी गराउने र विभिन्न निर्णयहरु बारे जानकारी गराउने, विभिन्न गतिविधिबारे जानकारी गराउने त्यो अभ्यास हुन...
सरकारले ल्याएको गुठी शंसोधन विधेयक नराम्ररी विवादको भुमरीमा फसेको छ । सरकारका प्रबक्ता र एक संसदको तर्क अनुसार गुथि सामन्तबादको भाँडो, किसानलाई शोषण गर्ने भएकोले समाप्त पार्न लागिएको हो । यसबाट विधेयकको एकमात्र भित्रि मकसद प्रष्टसँग गुठीलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने हो । यस विधेयकको विरोधको आन्दोलनलाई खण्डीत गर्ने खासगरी काठमाडौको सवालमा किसानको हित छ भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । त्य...
लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपुर्तिका लागि आव्हान गरिएको विज्ञापन वैधानिक या गैरसंवैधानिक ? यसरी पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तातीरहेको बेला गुुठी विधेयकविरुद्ध संगसंगै उपत्यकामा गरिएको विरोध आन्दोलनका कारण आयोगको मुद्दा छाँयामा धकेलियो । संयोगबस लोकसेवा आयोगले यतिनै बेला स्थापनाको ६९ औं वार्षिक उत्सव सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता ...
मूलधारको मीडीयाले कसरी कसको पक्षमा "सहमती" उत्पादन गरेर सर्वसाधारण जनता विरोधी काम गर्छ? यसबारे एडवार्ड एस हेर्मन र नोम चोम्सकीले एउटा लेख लेखेर सन्सारभरिका मूलाधारका मीडीयाहरूको कालो नियतको पर्दा खोलिदिए । अमेरिकामा "मूलधारको मिडीया" १९९० तिर सुरु भयो । जसले राजनैतिक नेता, कर्मचारी, धनवान, धार्मीक नेता, राष्ट्रपति, मन्त्री, बैंकर, नामी हिरो-हिरोइन, अनुसन्धानकर्ता आदिले बोलेका-भनेका-लेखेका...
ने. क. पा. माओवादी १ नं. प्रदेश समितिले वाम गठबन्धन हुनु अगावै ईलामको उम्मेदवारहरुको सिफारिस गर्ने जिम्मा मलाई दिएको थियो । सोहि मुताविक ईलाम जिल्ला समितिको पहलमा उम्मेदवारको सिफारिस भएतापनि वाम गठबन्धनपछि देशैभर योजनाहरुको फेरबदल भए झैं ईलाममा पनि भयो । २ प्रतिनीधिसभा र ४ प्रदेशसभामध्ये प्रतिनीधिसभा दुईको प्रदेश ख माओवादीको भागमा प¥यो । त्यसमा क. धिरेन् शर्मा रमण को उम्मेदवारी थियो । निर्वाच...
केही समयदेखि स्थिर रहेको मधेशको राजनीति फेरि एकचोटि तरंगित भएको छ । कैलालीबाट निर्वाचित राजपा नेपालका सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले आजीवन कारावासको फैसला सुनाउनु र अर्कोतिर पृथकतावादी अभियान चलाउँदै आएका डा. सीके राउत समूहसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिसँगै समग्र देशको राजनीति अहिले मधेश केन्द्रित भएको छ । संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन नगरिएको र आफूहरूलाई बाहिर र...
स्थानीय तहको लागि हुने चुनावको मिति नजिकी रहेको थियो । सबै साथिहरु आ–आफ्नै पालिका र वार्डहरुमा व्यस्त थिए । म काठमाण्डौदेखि आएपछि स्थानीय चुनावको शिलशिलामा सम्भव भएसम्मका सबै ठाउँमा पुगेको थिएँ, त्यस पालिका र वडाका उम्मेदवारहरुसँग । शिवा, चोकमागु, शुभाङ्ग, सिदिनका कुना कुनासम्म जहाँ जनयुद्धको बेलामात्र पुगिएको थियो । फालेलुङ्ग गाउँपालिकाको कुना कुना खाल्डे, माङ्गलिङ्गबुङ्ग लगायतका क्षेत्...
सीके राउतको आन्दोलन पृथकतावादी थिएन । उहाँ अभियन्ता पनि होइन । राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति कुनै नौलो, ऐतिहासिक, अनौठो भविष्यमा दूरगामी असर पार्ने, नेपालको राजनीतिमा एकदमै नयाँ मोड आउँछ अब भन्ने केही होइन । यो सबै पुरानै तरिका हो त्यसमा खासै नयाँपन छैन । यो कदमलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । सिके राउतले निकाल्नुभएको पर्चा र पम्पलेटको आधारमा सीके राउतलाई ...